यी नेताले दिए देउवालाई झड्का ! 'विकल्पमा आफू आउन सक्ने'
२६ मंसिर, काठमाण्डौ । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले नेपाली कांग्रेसको शर्मनाक हार हुनुका पछाडि धेरै कारण भएको बताएका छन् । अधिकांश नेताहरुले नेतृत्वको कमजोरीका कारण कांग्रेसले हारेको बताइरहँदा कोइरालाले भने कुनै एउटा कारणले मात्र पराजय भएको हुन नसक्ने बताए ।